Kalluumeysato Ajaaniib Ah Oo Lagu Qabtay Xeebaha Puntland – Goobjoog News
Kalluumeysato Ajaaniib Ah Oo Lagu Qabtay Xeebaha Puntland
Ciidamada badda ee maamulka Puntland ayaa gacanta kusoo dhigey doon kalluumeysi oo la sheegay iney la socdeen shaqaale ajaaniib ah, kuwaasi oo ku eedeysan in ay waxyeello u geysteen kalluumeysato Soomaaliyeed.
Doonidan oo ay la socdeen 12 shaqaale oo u dhashay dalka Yemen ayaa lagu qabtey xeebta degmada Eyl, kadib markii habeen kahor la tilmaamay iney dulmartay doonidaasi Laash yar oo ay lahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo Kalluumeysato ah, ayna la socdeen Labo ruux.
Mid kamid ah kalluumeysatidii saarnaa Laashkaasi ayaa la la yahay halka midka kalena dhaawac.
Doonidan ayaa la sheegay in ay si sharci darro ah uga kalluumeysanayesay xeebaha Puntland, waxaana shaqaalihii la socdey lagu hayaa deegaan ku dhow degmada Eyl ee gobolka Nugaal.
Weli maamulka Puntland faah faahin kama aanu bixin howlgalkaasi ay kusoo qabteen ajaaniibta u dhashay Yemen ee Kalluumeysatada ah.
Madaxweyne Xasan Oo Shacabka Ku Bogaadiyey Dib u Dhiska Dalka
Daahir Ciiro “Khilaafka madaxda waxaa keenay awoodaha aan kala cadeyn “ (Dhageyso)
Haweeney Lagu Gawracay Degmada Yaaqshiid Ee Magaalada Muqdisho (Dhageyso)
Sheekh Bashiir Maxamed Salaad: Madaxda dowladda khilaafka dhexdooda ha dhameeyaan (Dhageyso)
Jlrycj aynpst viagra online order cialis 20
Ihykvn lfimxn buy cialis cialis black
Bpflqe wzdkxx walmart pharmacy Gnnnr
Shirkii Baarlamaanka oo si Weyn looga Dooday Wax ka Bedalka Qodobka 10aad ee Sharciga Guddiga Madaxa Banaan ee Xuduudaha iyo Federaalka
cialis 20 image cialis online current cost of cialis 5mg cvs...
when will cialis go generic generic cialis for sale cialis p...
cialis prices 20mg buy cialis cialis headaches afterwards...
price of cialis cheap cialis canadien cialis...
viagra vs cialis cialis cialis 20 image...